Ọla ntị Pel
Olu olu Pearl
Pel dị larịị nke mmiri ọhụrụ
Akpụkpọ anụ pel rụrụ arụ
Ụra Pearl tọgbọrọ chakoo
site admin na 2021-11-27
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pearl niile anyị na-ahụkarị bụ ngwaahịa nke ihe ọkụkụ buru ibu, n'ihi Mikimoto, bụ́ onye zụlitere pearl nke ọma ná mmalite narị afọ nke 20. Tupu nke ahụ, naanị otu ụzọ isi nweta pearl bụ ịdabere na ndị ọkụ azụ dara ogbenye na-anakọta na ịkụ azụ o...
site admin na 2021-11-04
Ihe kpatara mbelata nke pearl bụ ichekwa. Otú ọ dị, ụfọdụ pearl ndị buru ibu ebiliwo n'ihi ụkọ ha, dị ka pearl mmiri dị elu karịa 16mm, na nnukwu pearl mmiri dị mma nke magburu onwe ya. ...
site admin na 2021-10-09
Baroque pearl na-ezo aka na pearl ndị ahụ nwere ọdịdị oge niile. Baroque sitere na Portuguese. Ọ pụtara pearl nke na-abụghị gburugburu, na mbụ na-ezo aka na pearl nwere ọdịdị dị egwu. Mgbe e mesịrị, ọ malitere n'ime ihe nka style, na-achụ ihe oge ụfọdụ ụdị. Ụdị Baroque ...
Ị yi ya ozugbo n'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi?
site admin na 2021-08-30
Ọchịchịrị na-amụpụta ìhè, nhụjuanya na-amụcha akụ. Nwanyị yi akwa pearl ga-enwu, ọ bụ eziokwu. Ihe olu olu ogologo pearl na-anya mmiri bụ otu ngwaahịa kachasị dabara adaba iji kwalite mmụọ, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi nke ojii, ọcha na isi awọ.
Mkpụrụ obi nwunye nke nwanyị
site admin na 2021-07-29
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị dara ogbenye ma ị nweghị ike iyi uwe mara mma. Yiri olu olu pearl a nwere ike ichetara onwe gị na ị bụbu onye ama ama…” Caroline kwuru——Ihe nkiri <2 Broke Girls> “Ịdị ọcha na ịdị nwayọọ”, “ịdị nwayọọ na ndidi”, &...
Pearl ọcha vs pearl nwere agba
site admin na 2021-07-14
Pel nwekwara agba mara mma. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ emebebeghị nke ọma ihe kpatara e ji guzobe pearl mara mma, enwere ike ikwubi site na agba nke pearl na agba nke pearl nwere nnukwu mmekọrịta na nne nke pearl nke na-amụ t ...
Obere ọla edo edo edo edo na ọla edo ọla edo ndịda South Sea
site admin na 2021-07-03
The pearl ọla edo anyị na-ekwukarị maka ya na-ezo aka na Pearl Sea South, nke bụ ụdị pearl mmiri nke a mụrụ n'oké osimiri dị n'ebe ugwu Australia, Philippines, Malaysia na agwaetiti Indonesia. N'ihi agba ọla edo ya, a na-akpọ ya Pearl Pearl Gold Sea, nke a na-akpọkwa South Sea Pe...
Kedu ihe kpatara ihe ịchọ mma Pearl gị ji na-agwụ mgbe niile?
site admin na 2021-06-25
A kọwo akụkọ banyere ikpe a na-enyo enyo na ọ ga-efu pearl n'ebe a na-anwale ọla: Mr. Chou ji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ USD1,500 zụtara nwunye ya otu olu olu pearl mmiri ọhụrụ, ma ozugbo otu oge okpomọkụ gasịrị, ihe olu ahụ nwunye ya na-eyikarị. gbajiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.5mm, ...
Ị họrọla ọla ntị ziri ezi?
site admin na 2021-06-16
"Ihe ịchọ mma anaghị agbachi nkịtị, mana ọ na-emetụ nwanyị n'obi karịa asụsụ ọ bụla." - Shakespeare Mgbe nwanyị na-atọ ụtọ zutere otu ihe ịchọ mma mara mma, a na-enwe mmetụta mmetụta n'etiti ha abụọ. Womenmụ nwanyị nọ na ...
site admin na 2021-06-03
"Ihe olu kacha mma, ngwa kacha dabara adaba n'etiti ihe ịchọ mma niile dị n'ụwa, yana ngwa dị mkpa dị n'ime uwe nwanyị ọ bụla - eriri pel. Nwanyị ọ bụla kwesịrị ịnwe eriri olu olu pearl.”—-Geneviève Antoine Dariaux Eleghị anya ị nweelarị ihe mgbawa…
Mmetụta dị n'ime nke pearl
site admin na 2021-05-21
Ọ bụ ezie na pearl enweghị ọmarịcha diamond na ịma mma na-adọrọ adọrọ nke bara nnukwu uru, agba ha dị nro na nke siri ike na ọdịdị okike na nke mara mma aghọwo ebe kachasị mma. Pearl ọ bụla bụ akụ jupụtara n'ike. Nke a dị omimi na-enweghị atụ ...
site admin na 2021-04-01
Na ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị nwere ike ịhọrọ ọla ntị ogologo pearl mbụ, ọ bụ ngwá agha kachasị mma iji gbanwee ọdịdị ihu, ma mara mma ma dị ịrịba ama, a pụrụ ikwu na ọ bụ ihe dị mkpa. Ọla ntị ogologo dị mfe ma na-emesapụ aka n'ụdị, enwere ike ijikọta ya na nkịtị, nke nwere ike ...
123 Ọzọ > >> Peeji nke 1/3
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị
Ngwaahịa pel, Ọla ntị Pearl Stud, Onyinye Nwanyị Nwanyị Ọhụrụ Ọhụrụ, Ọla ọcha Grey Freshwater Pearl, Huggie Hoops ọla ntị, Aaa Freshwater Pel,